China Achievement Medals fekitori uye vagadziri | Kingtai
Medals inzira inofadza yekupa mubayiro kubudirira muzvidzidzo. Isu tinotakura mutsetse uzere weakagadzika menduru dzekubudirira dzinozoitira mibairo mikuru kune vadzidzi vako gore rino. Vokorokotedzei kubva pabasa rakanaka raitwa munyuchi yekuperetera, kana kuvatumira netsika uye kudada kwekupedza kudzidza. Isu tinotakura menduru ingangoita yega nguva yekudzidza.
Tarisa uone kusarudzwa kwedu kweKubudirira Menduru, chero chingabudirire Achibudirira Menduru ndiwo mubairo wakakwana. Yedu Kubudirira menduru renji inosanganisira goridhe, sirivheri uye bronze yekubudirira menduru uye Achievement Badges.
Tambanudza kapeti tsvuku kune edu Achievement Statuette Medals, Medal Ribbon, Presentation Cases, Trophies, Makapu & Mipiro zvese nemitengo yakaderera. Goridhe Sirivheri & Menduru dzeBronze dzakakodzera chero nguva yekuratidzira kubva kuMitambo yeMitambo, Kuzivikanwa Kwekambani, Mharidzo dzeChikoro kana kupa mubairo chero nhengo yechikwata mubayiro wakasiyana siyana. Isuwo tine sarudzo huru yemhando yepamusoro maMedhibhoni maribhoni anopfuura makumi matanhatu akasiyana emisanganiswa yemuvara kubva kune yakambozivikanwa Red, White & Blue kune yedu Rainbow Ribbon. Yedu yeMedal Mharidzo Kesi idiki yekupedzisa yekubata inowanikwa mune akasiyana mavara.
Zvese zviri nyore zvakasarudzika neMetal Plate Engraving kana Yemahara Tsika Yakadhindwa Inoiswa neyako dhizaini kana logo.
Isu tinopawo Custom Medals, Lapel Pins & Badges, Ribhoni & Mharidzo Dzemagariro dzakagadzirwa kune ako wega dhizaini pamitengo yakaderera.
Kudza avo vanoshanda nesimba uye vanozadzisa zvinangwa zvavo neMunhu Akabudirira Achiwana Menduru kubva kuK2 Awards! Tine zvese kubva kugoridhe, sirivheri nendarira kana yakajeka menduru dzemara, zvese zviri nyore kugadzirisa. Menduru dzedu dzinouya nesarudzo yako yeribhoni yakasungirirwa uye, kune imwezve yekuwedzera, yakasarudzika yekunyora kumashure. Pinda menduru dzinowanikwa nesarudzo yako yekuisa chinamira chinoratidza nzvimbo zhinji dzebudiriro uye zvemitambo kubudirira. Unoda kushandisa yako dhizaini? Simply rodha dhizaini yako uye iwe uchagashira dhizaini chiratidzo mukati me24 maawa ebhizinesi. Paunotora mukana wezvedu zvakawanda dhisikaundi, iwe unogona kutenga zvimwe uye chengeta!
Pashure: Kufa kwakanamatira lapel pini
Zvadaro: MAMEDE OKUZIVISA